ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 6
ခင်မျိုးချစ် – ငါပြောမယ် ရွှေရှင်ဘုရင်ရဲ့ နင် ဆင်ခြင်ဦး (သမိုင်းတခေတ်က ပေးစာ၊ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း)စံတော်ချိန်သတင်းဂျာနယ်၊ သြဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၃ ထုတ် မှ ကောက်နုတ်သည် (၈၈ အရေးတော်ပုံကာလတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော သမ္မတကြီး ဦးမောင်မောင်အား စာရေးဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က ဆင်ခြင်နိုင်ရန်အတွက် သတိပေးစာ ပေးပို့ခဲ့သည်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်) Tags: မာမာအေး Related posts သန်းဝင်းလှိုင် – အာဏာရှင် ဗုိုလ်နေ၀င်း၏ ဇာတ်သိမ်းခန်း (အပုိုင်း ၆) (0) ကာတွန်းစောငို – အိမ်ပြန်မယ့် သမ္မတကြီး နဲ့ … (0) Zun Pwint – Articles (0) US Government to...
လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး (Dagon Tayar) ဒဂုန်တာရာ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၃ (Illustration – Than Htay Maung) ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုသည်က မပြေလည်သော ပြဿနာများကို စွမ်းသောနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ စစ်နည်းဖြင့် ရှင်းခြင်း မဟုတ်ပေ။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲပသည်။ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်မှစ၍ ဖူးပွင့်စဒီမိုကရေစိဆန်းစပြုပြီ။ သို့သော်မမျှော်လင့်ဘဲ ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ကြုံခဲ့ရသည်။ ပြည်တွင်းစစ်သည် စစ်နည်းနှင့် ပြေရှင်းသော နည်းတစ်နည်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်တွင်းစစ်သည် မဖြစ်သင့်သော အခြင်းအရာဟု နားလည်မိသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးမရှိလျှင် တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေးလုပ်ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသွားသည်။ တော်လှန်မှုဆိုသည်မှာ ကောင်းသော ပြောင်းခြင်း(သို့မဟုတ်) ပို၍ကောင်းသော ပြောင်းလဲခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ အခြေခံပြောင်းလဲရေးလုပ်ရာတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှသာလျှင် လူသားပြည်သူတို့၏ စွမ်းအားကို လွတ်လပ်စွာသုံးစွဲနိုင်မည်သာဖြစ်သည်။...
လားရာ ကိုကိုကြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၉ မှာ မိုးမခမှာ တင်ဆက်ခဲ့ပြီး (ပြန်လ ည်ဆန်းသစ်ခြင်း) (ကိုကိုကြီး၏ မိခင်ကွယ်လွန်စဉ်က သူကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့သော အမှတ်တရစာ။ ထိုစဉ်က ၎င်းကို ထောင်တွင်းမှ ခေတ္တထုတ်ပြီး မိခင်အသုဘသို့ ရှု့ခွင့်ပြုခဲ့သည်) “ဂျိုင်း” ကနဲ တံခါးပိတ်သံ၊ မင်းတုံးထိုးသံ၊ သော့ခတ်သံ မက်တဲလစ်သံတွေ။ သံစဉ် မညီ၊ နာရီမရှိ၊ စည်းချက်မကျ၊ တရွေ့ရွေ့ဝေးသွားတဲ့ ဖိနပ်သံများ။ ခါတိုင်း စကား သိပ်များလေ့ရှိတဲ့ အခန်းဖေါ်က ရုတ်တရက် စူးစမ်းတဲ့အကြည့်။ ချက်ချင်း သဘောပေါက်သွားတဲ့ဟန်၊ သက်ပြင်းချ၊ တိတ်ဆိတ်။ ပြန်လာကတည်းက ဘာမှမပြောဖြစ်၊ ပြောချင်စိတ်လည်းမရှိ။ ပရိသတ်အမြင်မှာ တည်ငြိမ်ကြံ့ခိုင်သယောင်၊ တကယ်က ရုပ်နဲ့နာမ် မကပ်တာ၊ အခန်းထဲပြန်အရောက်၊ အိပ်ယာနေရာပေါ်လှဲချ။ လက်ထဲက ယပ်တောင်ကို...
ကြယ်သီးတိုင်းပြည် (ရွှေသွေးဂျာနယ်) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၁၉၇၈ ဇာတ်လမ်း တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း၊ ပန်းချီ ဦးဘကြည် မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ (အဲသည်တုန်းက ရွှေသွေးဂျာနယ်ကို ဖတ်ဖူးသူ ပရိသတ်တွေထဲမှာ ရှိသေးလား) Tags: တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း Related posts အနက်ရောင်ကျူးလစ်ပန်းနှင့် ညီအမလေးဖော် – တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း (0) တက္ကသုိုလ်ရွှေရီဝင်း ၏ “ကျွန်တော်နှင့်ညီမလေး လုိုလာတုို့၏ ဇာတ်လမ်းများ (၁) ၊ (၂)” (0) တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း – တက္ကသိုလ်စစ်စစ် (0) တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း – ပင်ဒိုးရား၏ သေတ္တာ (0) တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း၏ မျက်လုံးစိမ်းနှင့် မိန်းခလေး ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတိုများ (0)
ကြယ်သီးတိုင်းပြည် (ရွှေသွေးဂျာနယ်) စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၁၉၇၈ ဇာတ်လမ်း တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း၊ ပန်းချီ ဦးဘကြည် မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ ဧပြီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ (အဲသည်တုန်းက ရွှေသွေးဂျာနယ်ကို ဖတ်ဖူးသူ ပရိသတ်တွေထဲမှာ ရှိသေးလား) No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်သော်က (ခ) ဗုိုလ်မှူး ဘသော် မတ်လ ၁၆၊ ၂၀၁၃ (၁) အနှစ်၂၀ ဆိုပါလားဟေ့ …။ အမြင်ကပ်လောက်အောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တပ်မက်စိတ်ရှိသူများက ကြောင်သူတော်သောကနဲ့လေ…။ အနှစ်၂၀ ဆိုပါလားဟေ့ …။ ကောက်ကျစ်သော အမြင်တိုသော ကိုယ်ကျိုးငဲ့ ရန်လိုစိတ်နဲ့လူလားမြောက်လာတဲ့ အာဏာပါးကွက်သားတို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားခြင်းငှာ မတတ်စွမ်းနိုင်တဲ့ ကောက်ရိုးမျှင် ဥပဒေနဲ့လေ…။ အနှစ်၂၀ ဆိုပါလားဟေ့ …။ အကောင်းအဆိုးအပေါ်မှာ ရှက်ဖွယ်လိလိ ဥပက္ခာပြုနိုင်သူများက ယုတ်ညံ့သိမ်ဖျင်းမှုနဲ့ မသန့်စင်သောအရာမှန်သမျှ မုသားပုဒ်မနဲ့လေ…။ အနှစ်၂၀ ဆိုပါလားဟေ့ …။ ရုပ်မှာ အာဏာနဲ့ ကျည်ဆန် နာမ်မှာ ဖက်ဆစ် မအောင်မြင်တဲ့ သူရဲကောင်းများရဲ့ အာဃာတထက် အဆိပ်အတောက်ပြင်းတဲ့ ခုံရုံးအမိန့်နဲ့လေ…။ (၂) “မီးပွားကလေးကနေပြီး...
မဏ္ဍပ်မထိုးရ၊ လူမစုရ၊ စားမြိန်ထုတ် မထည့်ရ၊ ရေအိုးမထွဲလိုက်ရ၊ မနက်စောစောချတဲ့ အသုဘ ဖုန်းမော်ရေ … အမျှ အမျှ အမျှ စက်မှုအားမာန်စာစောင်၊ ၁၉ ၈၈ စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ကောက်နုတ်ချက်၊ မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၃ မဏ္ဍပ်မထိုးရ လူမစုရ စားမြိန်ထုတ်မထည့်လိုက်ရ ရေအိုးမခွဲလိုက်ရ မနက်စောစောချတဲ့အသုဘ ဖုန်းမော်ရေ အမျှ . အမျှ . အမျှ (ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသည်။ စက်မှုအားမာန် စာစောင်၊ အမှတ်စဉ် (၄)၊ ၁၇.၉.၈၈ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။) ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်၊ မတ်လ အရေးအခင်းတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သော ကိုဖုန်းမော်၊ ပဉ္စမနှစ် (ဓာတု) ၏ အမကြီး မမာမာဝင်း၊ သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ကြသော...
မလိမ္မာ တခါမိုက်စမြဲ – ဇာတ်လမ်း တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း၊ သရုပ်ဖော် ပန်းချီဦးဘကြည် (F.R.S.A (London), M.A.II (U.S.A), Ecole Superieure National des Beaux-arts(Paris)) ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း၊ မတ် ၉၊ ၂၀၁၃ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်း၊ အပတ်စဉ်ထုတ်ဝေသော၊ စာပေဗိမာန်စာစဉ်တခုဖြစ်သည့် ရွှေသွေး ဂျာနယ်မှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
ခင်မျိုးချစ်ရေး၊ ဂျုနီယာဝင်း ဘာသာပြန် – နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် လမ်းခွဲခြင်း အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်း ကောက်နုတ်ချက်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၃ Quest for Peace (Khin Myo Cht) မှ Goodbye to Politicians ကို ဘာသာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ အတွေးအမြင် အမှတ် ၂၅၁ မှာ ဖော်ပြထားတာကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ စာရိုက်ပေးမည့် စေတနာရှင်ရှိရင်တော့ ဒီစာမူကို စာရိုက်ပြီး တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီအတိုင်း ဖတ်ကြပါဦး။ (မိုးမခ) မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ပြောင်းကာလ နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ စာရေးဆရာမ လင်မယားတို့ လမ်းခွဲကို ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Tags: ခင်မျိုးချစ် Related posts ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် – စာရေးဆရာဟူသည် (0)...